အချစ်ရေး Archives - Online Hartha
December 26, 2021 by Online Hartha
ကျွန်မ မာနမကြီးပါဘူး ကိုယ့်ကိုမလိုအပ်မှန်းသိရင် မတွယ်တာတတ်တဲ့ အကျင့်ပဲရှိတာ… ကျွန်မ မချစ်တတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်ကိုမချစ်မှန်းသိရင် လွှတ်ချတတ်တဲ့ စိတ်ကလေးပဲရှိတာ… ကျွန်မဆိုတာ ကိုယ့်ကို မခေါ်မပြောချင်တဲ့ သူကို အောက်ကျို့ခံပြီး မခေါ်တတ်ဘူး…မလိုမှန်းသိရင် လှည့်ထွက်ဖို့ အဆင်သင့်ပဲ… ကိုယ့်အပေါ် သံယောဇဉ် မရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ကို ကျွန်မ ဘဝထဲနေရာမပေးတတ်ဘူး… ကိုယ့်အပေါ် လိုမှသုံးတတ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း ရှိမနေပေးတတ်ဘူး… ကျွန်မ မာနကြီးတာ မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်တာ… တစ်ဖက်က မလိုအပ်မှန်းသိရဲ့သားနဲ့တွယ်ကပ်နေမိရင် ကိုယ်ပဲခံစားရမယ်လေ… ကိုယ့်ကို မချစ်မှန်းသိရဲ့သားနဲ့ ဆက်ချစ်နေရင်နေ့တိုင်း ငိုကြွေးရမှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ မဟုတ်လား… ကိုယ့်ကို မလိုတဲ့သူကို အောက်ကျို့ခံပြီးတွယ်တာနေရင် ကိုယ့်ပဲ တန်ဖိုးကျမှာပေါ့… ကျွန်မကို နာကျင်စေမယ့်အရာတွေဆို ရှောင်တယ် ကျွန်မကိုအနာတရဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေဆို မဖက်တွယ်တတ်ဘူး… ကျွန်မ မာနကြီးတာမဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်တာပါ…❤ … Read more
“သင့်ကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ချစ်သူကို နောင်တရသွားအောင်လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၅)မျိုး”
November 17, 2021 by Online Hartha
“သင့်ကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ချစ်သူကို နောင်တရသွားအောင်လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၅)မျိုး” ကိုယ့်ဘက်က ချစ်နိုင်သလောက် ချစ်ပေးခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်ချစ်မှန်းသိလို့ အနိုင်ယူပြီး ကိုယ့်အချစ်တွေကိုတန်ဖိုးမထားဘဲ ပစ်ချ ခဲ့တဲ့ သူမျိုးနဲ့ကြုံ ရတဲ့ အခါ ဒီအတွက် ပြိုလဲခံစားမနေပါနဲ့။ ကိုယ့်အချစ်တွေကို တန်ဖိုးမထား ခဲ့တဲ့ သူအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိခိုက် မခံဘဲ သူတို့တွေနောင်တရသွားအောင် ဒီလို နည်းလေးတွေနဲ့ တုံ့ပြန် လိုက်ပါ။ (၁) ဂရုမစိုက္ပါနဲ့ ကိုယ်ချစ်တာတွေကို သူတန်ဖိုး မထားမှန်း သိပြီ ဆိုတာနဲ့ သူ့ကို တွယ်ကပ်နေ တာထက် ဂရုမစိုက်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ သူ့ရဲ့အပြုအမူတွေ၊ အချိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင့်ဘက်က လုံးဝ ဂရုမစိုက် ဘူးဆိုတာ သူသိအောင် ပြသပါ။ ဒါမှ သင့်ရဲ့တန်ဖိုးကို သူ့ဘက်က နားလည် လာမှာပါ။ … Read more
ခင်များ အချိန်ရရင် ဒီစာလေးကို ဆုံးအောင်ဖတ်သွားနော်
November 11, 2021 by Online Hartha
ခင်များ အချိန်ရရင် ဒီစာလေးကို ဆုံးအောင်ဖတ်သွားနော်…. တကယ်ဖြစ် သွားတာလေးပါ အဓိကပြောချင် တဲ့ ရည်ရွယ် ချက်ကတော့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူကို ရှိနေတုံး တန်ဖိုးထား တက်ဖို့ပါပဲ သူမ ရှိတော့မှ ခင်များငိုနေရင် အလကားပဲ ခင်များ အချိန်ရရင် ဒီစာလေးကို ဆုံးအောင်ဖတ်သွားနော်…. “မျက်ရည်ခိုင်မ ဖတ်ကြည့်ပါ ” ကောင်မလေး ။ ။ “ ငါ့မှာ ရောဂါရှိနေပြီတဲ့ ´´ ကောင်လေး ။ ။ “ ဘာမှမပြောပဲ ပြုံးနေတယ် ´´ ကောင်မလေး ။ ။ “ ငါ့ရောဂါက ဒီလောကကြီးထဲမှာ ကြာကြာ နေရတော့မှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့ ´´ “ ကောင်လေးက ဒီတစ်ခါလဲ ပြုံးနေခဲ့တယ် ´´ … Read more
သငျ့ကို တဈနသေ့ခြောပေါကျ လမျးခှဲပွီးထားခဲ့မဲ့ ယောကျြားတဈယောကျရဲ့လက်ခဏာ(၇)မြိုး
July 12, 2021 by Online Hartha
သင့်ကို တနေ့သေချာပေါက် လမ်းခွဲပြီးထားခဲ့မဲ့ ယောကျာ်းတယောက်ရဲ့လက္ခဏာ(၇)မျိုး အချစ်ရေးကိစ္စရပ်ဟာ ထမင်းစားရေသောက်တဲ့ ကိစ္စလောက် လွယ်ကူလှသည်တော့ မဟုတ်ပါ။ တစ်ဘဝလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တတ်ပြီး၊ တစ်ဘဝလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်လို့ ခံယူထားသူတွေရှိသလို၊ ကြောရရုံ၊ အတွေ့အကြုံတစ်ခုသက်သက်သာ သဘောထားသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ အမျိုးသမီးတွေအဖို့် အရွေးမမှားဖို့ လိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဆိုတာ နစ်နာစရာရှိရင် ပိုပြီး နစ်နာတက်လို့ပါ။ ဒါကြောင့်မို့ တကယ်လို့သာ သင့်ချစ်သူ အမျိုးသားဟာ အောက်ပါ လက္ခဏာတွေ ပြနေရင် သူ သင့်ကိုတစ်နေ့နေ့မှာ ထားခဲ့မှာ အသေအချာပါဘဲ။ Shwemom ပရိသတ်ကြီး တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ပါဦး။ (၁) သင့်မိသားစုကို မတွေ့လို၍ ရှောင်ဖယ်နေရင် ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တစ်ကယ် ချစ်ခင်လက်ထပ်လိုတဲ့ အမျိုးသမီးဆိုရင် မိမိဘက်က တောင်းဆိုစရာမလိုပဲ၊ ဘယ်နေ့ အိမ်ကို လိုက်ခဲ့ရမလဲဆိုတာ တွင်တွင်မေးပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကို … Read more
သင့်ရဲ့အချစ်တွေကို ချစ်သူကဘယ်လောက်အထိ တန်ဖိုးထားသလဲဆိုတာ သိရှိနိုင်မယ့် အချက်(၁၀)ချက်
May 26, 2021 by Online Hartha
ကိုယ့်ကို ချစ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ကို ချစ်သူကတန်ဖိုးထားတာကို မိန်းကလေးတိုင်းမျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကပေးလိုက်တဲ့အချစ်တွေကို သူ့ဖက်ကတကယ်ပဲတန်ဖိုးထားရဲ့လားဆိုတာ တိုင်းတာဖို့အတွက်ကတော့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ယခုလိုအချက်တွေသာ သင့်ရဲ့ချစ်သူဆီမှာ မြင်တွေ့ရမယ်ဆိုရင် သင့်ကိုသူဘယ်လောက်ထိ မြတ်မြတ်နိုးနိုးတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကို သိရှိနားလည်ပါလိမ့်မယ် ၁ ဒီကမ္ဘာပေါ်က အခြားယောက်ျားတွေနဲ့ မတူတဲ့အကြည့်နဲ့ သင့်ကိုကြည့်တတ်တယ် မျက်လုံးဟာ နှလုံးသားရဲ့တံခါးပေါက်တချပ်ဆိုရင် မမှားပါဘူး တကယ်လို့ သင့်ချစ်သူက သင့်အပေါ်ဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကို သိချင်ရင်တော့ သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကနေတဆင့် ရှာဖွေ့ဖို့ကို အကြံပြုချင်ပါတယ် သူသင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါတိုင်း သင့်ရဲ့နှလုံးသားက ဖော်မပြတတ်တဲ့နွေးထွေးတဲ့ခံစားချက်တွေကို အလိုလိုခံစားနေရတယ်ဆိုရင် သူသင့်ကိုအရမ်းတန်ဖိုးထားတာ သိသာပါတယ်… ၂ သင့်ရဲ့အပြုံးအတွက် အရာရာကိုဂရုစိုက်တတ်သူ သင်အမြဲတမ်းပျော်နေတာကိုပဲ သူမြင်ချင်ပါတယ် ဒါ့ကြောင့် သင်ကိုပျော်အောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက် သူဘယ်လောက်ပဲအလုပ်ရှုပ်နေပါစေ သင်ဆီကိုပုံမှန်ရောက်အောင် လာတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင်ပျော်နေတဲ့အခါ သူပျော်နေသလိုပဲ ခံစားရလိုပါ… ၃ သူ့ဘဝအတွက် ဦးစားပေးအဖြစ် … Read more
အချစ်ရေးမှာ လူရွေးမှားနေပြီဆိုတာ သိသာစေတဲ့အချက် (၆)ချက်…
May 23, 2021 by Online Hartha
ချစ်သူရွေးကြတဲ့အခါ ဘယ်လို စံနှုန်းတွေနဲ့ ရွေးကြမှာလဲ။ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ideal type တွေက မတူကြပေမယ့် အချစ်ရေး ကံကောင်းချင်ကြတာကတော့ လူတိုင်းပါ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ပျိုမေတို့အနေနဲ့ အချစ်ရေးမှာ လူရွေးမှားနေပြီဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ (၁) သင်လုပ်သမျှအရာရာကို အဆိုးဘက်က ဝေဖန်တတ်တယ် သင်ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစား ပုံစံကအစ၊ သင်ရွေးချယ်တဲ့ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်အလယ်၊ သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ဆိုင်တာတွေအဆုံး … သူ့အမြင်မှာ အပြစ်တင်စရာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ရှိနေတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့အရာရာကို အဆိုးဘက်က ဝေဖန်နေတတ်တယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ လူရွေးမမှားဘူး ဆိုရင်တောင် မှန်တော့ မမှန်ပါဘူးလို့ ပြောရ မှာပါ။ (၂) စကားပြောမှားသွားမှာအမြဲစိုးရိမ်နေရတယ် တခါတရံ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပြောနေတာမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင် တွေးမိတဲ့ အထိပါပဲ။ … Read more
May 14, 2021 by Online Hartha
မိန်းမတစ်ယောက်က ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်တဲ့အတွက်သာ ထိုယောကျာ်းနဲ့တစ်ဘဝသာ ဖြတ်သန်းဖို့အတွက် လက်ထပ်လိုက်ကြတာပါ။ လက်ထပ်လိုက်တဲ့အခါ သူမအပျိုဘဝကဝတ်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ကိုလည်း ချွတ်ချသွားနိုင်ပြီးဖိနပ်ပါးလေးနဲ့လည်း လမ်းကြမ်းကြမ်းမှာ လျှောက်ရဲပါတယ်။ မျက်နှာပြင်မှာ မိတ်ကပ်မရှိ နှုတ်ခမ်းနီလည်းမရှိပဲအဆီတဝင်းဝင်းနဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ တကုပ်ကုပ်အလုပ်ရှုပ်ရင်းသူမရဲ့ယောကျာ်း အိမ်ပြန်လာချိန်ကိုထမင်းဝိုင်းပြင်ပြီး စောင့်မျှော်နေမိပါလိမ့်မယ်။ လက်မထပ်ခင်က အိမ်ကမင်းသမီးတစ်ပါးလို ဖူးဖူးမှုတ်ခံခဲ့ရပြီးဘာမှမလုပ်တတ်ခဲ့ရင်တောင် သူမရဲ့ယောကျာ်းကို ချစ်တဲ့အတွက်အိမ်အလုပ်တွေကို သင်ယူပြီး အိမ်ဖေါ်တစ်ယောက်လိုကျိုးနွံစွာပြုစုကြပါလိမ့်မယ်။ သူမဟာ ခဝါသည်တစ်ယောက် မဟုတ်ပေမဲ့သူမချစ်တဲ့ ယောကျာ်းရဲ့အဝတ်စားကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလျှော်ဖွတ်မီးပူတိုက် ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အပျိုဘဝက ဝမှာစိုးလို့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းပြုစု ဂရုစိုက်ခဲ့တဲ့ပိန်သွယ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတောင် ပုံပျက်သွားမှာကိုလည်း မမှုပဲသူချစ်တဲ့ယောကျာ်းအတွက် သားသမီးရတနာလေးတွေမွေးဖွားပေးပါလိမ့်မယ်။ နာနီတစ်ယောက်လို လခတွေမရပေမဲ့လည်းသူမချစ်တဲ့ ယောကျာ်းနဲ့မွေးဖွားလားတဲ့ ရင်သွေးအတွက်နေ့မအိပ်ညမအိပ် ပိုးမွေးသလိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ သားသမီးတွေကို ထိန်းကျောင်းရင်း အလှပြင်ချိန်မရှိတော့လို့သူများမိန်းမတွေလောက် မလှတော့ပေမဲ့ သူမချစ်တဲ့ ယောကျာ်းနဲ့ကလေးတွေအတွက် ကျေနပ်နေမိတာက မိန်းမတွေပါ။ မိန်းမတွေဒီလိုအစွန့်လွှတ် အနစ်နာခံပေးလိုက်ရတာကသူမတို့မှာ ယောကျာ်းရှားလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူမချစ်တဲ့ … Read more
သငျ့ကို မခဈြနိုငျတဲ့သူ တဈယောကျကို အတငျးကွီး တှယျကပျမနပေါနဲ့..
May 10, 2021 by Online Hartha
သငျ့ကို မခဈြနိုငျတဲ့သူ တဈယောကျကို အတငျးကွီး တှယျကပျမနပေါနဲ့ ။ တကယျတော့ သူတို့ဟာ သငျထငျသလို တနျဖိုးမကွီး လှပါဘူး ။ တနျဖိုးဆိုတာ သငျ့စိတျက သတျမှတျခွငျးနဲ့ ဆိုငျပါတယျ ။ ပိုငျဆိုငျလိုစိတျ ကွီးမားလာတာနဲ့ အမြှ တနျဖိုးက တကျလာပါတယျ ။ ပိုကျဆံနှဈရာလောကျသာ တနျတဲ့ ဖောငျတိနျ တဈခြောငျးကို တနျဖိုးကွီးတယျ လို့ သတျမှတျလိုကျတာနဲ့ ဖောငျတိနျရဲ့ တနျဖိုးဟာ မွငျ့တကျသှားနိုငျပါတယျ ။ သငျဟာ လူတဈယောကျကို အရမျး ပိုငျဆိုငျလိုခငျြပွီ ဆိုတာနဲ့ သငျဟာ သူ့အပျေါမှာ တနျဖိုးထားလာပါပွီ။ သူ့ကို ပိုငျဆိုငျလိုကျတာနဲ့ သငျ့ဘဝဟာ ပွီးပွညျ့စုံပွီလို့ ထငျကောငျး ထငျလာနိုငျပါတယျ ။ အဲ့ဒီလို ထငျလိုကျမယျ ဆိုရငျ သငျ့ဘဝထဲကို စိတျညဈစရာတှေ အလုံးအရငျး … Read more
May 9, 2021 by Online Hartha
လမျးခှဲတယျဆိုတာ ဘယျတုနျးကမှ ပြျောရှငျစရာကိစ်စတဈခုမဟုတျခဲ့ပါဘူး။ အမြိုးသားပဲဖွဈဖွဈ အမြိုးသမီးပဲဖွဈဖွဈ လမျးခှဲခြိနျမှာ ကွကှေဲဝမျးနညျးမှုတှေ၊ နာကငျြခံစားရမှုတှကေို ရငျဆိုငျကွရမှာတော့ အနညျးနဲ့ အမြားပါပဲ။ မကျြရညျတှေ၊ ဒေါသအမကျြတှေ၊ လှမျးဆှတျ တမျးတမှုတှေ၊ စိတျရှုပျထှေးစရာညတှေ၊ စိတျလိုကျမာနျပါ အလှနျအကြူးစားသောကျမှုတှဟော Relationship တဈခု အဆုံးသတျသှားခြိနျမှာ ကွုံရတတျတာမြိုးတှပေါ။ ဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာ အမြိုးသားဘကျကဖွဈစေ အမြိုးသမီးဘကျကဖွဈစေ ဘယျသူပိုခံစားရသလဲဆိုတဲ့ အတှေးမြိုးဝငျလာလရှေိ့ပါတယျ။ ပတျဝနျးကငျြကလညျး ဒီလိုမေးခှနျးမြိုးကို သိပျပွီးစိတျဝငျစားတတျကွပါတယျ လူနှဈယောကျရဲ့ ခဈြဇာတျလမျးတဈခု အဆုံးသတျသှားခြိနျမှာ ဘယျသူပိုခံစားရလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးဟာ အရေးပါတယျလို့တော့မထငျမိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့လညျး ကာယကံရှငျတှကေိုယျတိုငျသာမက အနီးဝနျးကငျြကလူတိုငျးက ဒီမေးခှနျးအပျေါ စိတျဝငျစားနကွေဆဲပါ။ လုံးဝ လမျးခှဲပွတျစဲလိုကျကွတာလား။ဒါမှမဟုတျသူငယျခငျြးတှအေဖွဈ ဆကျရှိနကွေဦးမှာလားဆိုတာမြိုးကလညျး လူတိုငျး သိခငျြကွတဲ့ မေးခှနျးမြိုးတှလေိုပါပဲ။ တကယျတော့ ဆကျဆံရေးတဈခု ပွတျတောကျသှားတဲ့အခါမြိုးမှာ နှဈဦးစလုံး ပွငျးပွငျးထနျထနျ ခံစားရတတျပါတယျ။ ဘယျသူက စတငျလမျးခှဲသညျဖွဈစပေေါ့။ … Read more
သငျ့ခဈြသူဟာ တခွားတဈယောကျဆီ စိတျရောကျနမှေနျး သိသာတဲ့ လက်ခဏာ (၅)မြိုး …
May 4, 2021 by Online Hartha
သငျ့ခဈြသူဟာ တခွားတဈယောကျဆီ စိတျရောကျနမှေနျး သိသာတဲ့ လက်ခဏာ (၅)မြိုး အခဈြရေးတဈခုဟာ နှဈဦးနှဈယောကျနဲ့ တညျဆောကျထားရတဲ့ နှဈယောကျပိုငျ ကမ်ဘာလေးတဈခုဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အပွနျအလှနျ ဂရုစိုကျခွငျး၊ ခဈြခွငျး၊ စှဲလနျးခွငျးတှရှေိမှာ အခဈြရေးတဈခုက အဆငျပွသေလို ရှဆေ့ကျလို့ရတာပါ။ ဒါပမေယျ့လညျး တဈဖကျဖကျက ခဈြခွငျးတှေ လြော့လာတယျ၊ စိတျဝငျစားမှုတှေ လြော့လာတယျ၊ အာရုံက တခွားကိုပဲ ပြံ့လှငျ့နတေော့မယျဆိုရငျတော့ ဒီအခဈြရေးတဈခုဟာ ရှဆေ့ကျလို့ မရတော့ပါဘူး။ ခုဖျောပွပေးမှာကတော့ သငျ့ခဈြသူဟာ သငျ့ဆီမှာ စိတျမရှိတော့ကွောငျး ဖျောပွနတေဲ့ လက်ခဏာတှပေဲဖွဈပါတယျ (၁) ပွောစရာစကားတှမေရှိဘူး … သငျတို့နှဈယောကျကွားမှာ ပွောစရာကိစ်စတှေ၊ အကွောငျးအရာတှေ မရှိဘူး။ စကားဝိုငျးဟာ တိတျဆိတျနပွေီး သငျ့ခဈြသူက ဖုနျးနဲ့ပဲ တဈခြိနျလုံး ဂိမျးဆော့နတောမြိုး၊ သငျ့အကွောငျးကို ဘာမှမေးမွနျးခွငျး မလုပျတာမြိုးတှကေ … Read more